दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब ७.३ प्रतिशतले वृद्धि
दक्षिण कोरियामा कामदारहरुको तलब वृृद्धि भएको छ। कोरियाली श्रम मन्त्रालयले आइबारदेखि लागु हुने गरी कामदारहरुको तलब ७.३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। निर्धारित ज्याला अनुसार अब कामदारले प्रतिघण्टा ६ हजार चार सय ७० वन प्राप्त गर्नेछन्।
अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।
मधेसी रिझाउँदै कांग्रेस, यसरी हुँदैछ तालमेल
कहिँ नभएको जात्रा देखाउदै सेना, नक्सा नै पास नगरी हस्पिटल भत्काएर बिजनेस मल बनाउदै !
बाफ रे ठाकुरको सम्धी–सम्धिनी मोह !
ओली–प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष बन्नेगरी यसरी हुँदैछ तत्काल पार्टी एकता
मन्त्री यादवको मेलम्चीको बजेटमा ‘कु दृष्टी’ लागेपछि निम्तो नआई स्पेन सररर…